Ukuthukuthela emva kokucheba i-pubis
Ngokukhawuleza emva kokuba inkqubo yokukhutshwa kweenwele, amantombazana abhekene nengxaki enjengoko kwesikhumba. Ingakumbi ingxaki ivela xa kuqhutyelwa indawo kunye nekhumba elibuhlungu, umzekelo, kwindawo ye-pubic. Ukuphendula okunjalo kwesikhumba kuyinto eqhelekileyo, ngoko kuvela kwimvelo. Oku kubangelwa ukuba ukucheba ikhupha inxalenye encinci ye-epidermis, oko kuthetha ukuba izicubu zonakaliswe. Ngokuqinisekileyo, umzimba uphendule kulokhu ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwindawo yokulimala. Ukuphendula komzimba kukukhawuleza nokuphucula ukuphilisa amanxeba.
Yimzuzwana engathandekiyo kukuba akuthathi ixesha elide ukucaphukisa, kunzima ukususa. Ngoko ke, kulula ukukhusela le miphumo emibi.
Into yokuqala yokukhumbuza ukuhlamba iinciti zakho ngokufanelekileyo. Ngaphambi kokuba uchenge i-pubis, kuyimfuneko ukuxhoma le ndawo ngamanzi afudumeleyo. Nangona okukhethwa kukho kukukhetha ukuhlamba emva kokuhlamba okanye ubushushu. Emva kokuhlamba, iinwele ziba ncinane. Ingongoma yesibini kukusetyenziswa kwamalungiselelo e-shaving. I-cosmetology yanamhlanje ayizange idlule le ndawo kwaye inika abafazi inamba enkulu yeendlela zokwambisa iindawo ezibucayi. Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo ze-foam kunye ne-gels zokucafa kwizinto zokuvelisa zehlabathi kunye namafemu amancinci. Ukuba usebenzisa ezi zixhobo, ukucaphukisa, ukuba kukho, ngoko ubuncinane kuya kubonakaliswa kakhulu.
Isigaba sesithathu sichithwa ngqo. Shave izinwele zakho kuphela kwindlela yokukhula, oko kukuthi, ukusuka phezulu phezulu. Ngokungathandabuzekiyo, isiphumo esinjalo siza kuba sibi ngakumbi, kodwa ke unako ukuphepha ukucaphuka. Emva kwenkqubo, kufuneka usebenzise uncedo lwe-shaving, umzekelo, ukhilimu okanye utyando oluya kukunceda ukususa ubomvu. Amantombazana amaninzi ayengayithobeli le nqanaba lokugqibela, kwaye ize, ekubeni igalelo le mali ibonakala.
Ngaphandle kokuqwalasela yonke le mithetho, kwenzeka ukuba ukucaphukisa emva kokucheba kuqhubeka. Emva koko kufuneka ucinge ngendlela yokuphelisa ukucaphuka. Imiphumo emihle kule meko inikezwa ngemveliso yezonyango eziqukethe ama-hormone ekubunjweni kwazo. Ngokomzekelo, i-hydrocortisone i-ointment okanye ukhilimu. Sebenzisa le mali ngokukhawuleza emva kokucheba, ukucoca iindawo ezibomvu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izidakamizwa ze-hormone zinemiphumo emihle yokuchasana, ukususa ubomvu. Isiphumo sinxalenye ngenxa yokuba i-hydrocortisone inciphisa kakhulu imithana yegazi, kwaye ngoko indawo eyonakalisiweyo iya kufumana igazi elingaphantsi. Nangona kunjalo, akuyimfuneko ukuba zibandakanyeke neendlela ezinjalo. Sebenzisa ezi zixhobo akufanele zibe ngaphezu kweebini okanye kathathu.
Enye indlela, oku kuguquka rhoqo kweelayi. Oku kubangelwa ukuba iimishini ezilahlayo zicheba iinwele ezikufutshane nomzimba. Ukuba i-blade ibonakele kwaye ingcolile, umngcipheko wokukhathazeka kwesikhumba ukwanda. Nama-microorganisms asuka kumngcipheko ococekileyo, ukufikelela esikhwameni esicasulayo, yandisa nje imeko. Sebenzisa umshini-xesha omnye kufuneka ungabi ngaphezu kwamaxesha amathathu. Ngelo xesha, kuyimfuneko ukugcina uomatshini behlambulukile. Ukuba le miqathango ayizange ifumaneke, umatshini ungcono ukulahla uze uthathe entsha.
Enye indlela yokuthintela ubomvu nokucaphuka kwesikhumba se-pubic kukusetyenziswa kombane. Amashanga ombane anika isikhumba esilula, kunye nokugquma kunye nentukuthelo emva kwabo kubuncinci.
Kwaye, ekugqibeleni, kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba xa kucatshulwa emva kwenkqubo nganye yokukhutshwa kweenwele kwi-bikini zone, kungcono ukuba ungasebenzisi umatshini olahlayo. Kule meko, unokuzama ukusebenzisa iirakhi ezikhethekileyo ukususa izityalo kwiindawo ezibucayi. Ubuncwane bokugwenxa nokusetyenziswa kwezi krama kuncinci, kuba ezo ziyobisi zingonakalisekanga ubuninzi beentloko ezinobuhlungu, xa kuthelekiswa noomatshini obuqhelekileyo. Ezi kremu zinefuthe elilodwa kuphela - oku kukuvumba okweqile. Nangona kunjalo, mhlawumbi, kungcono ukuva ubunzima beeyure ezimbalwa, kungekudala ukungabi namandla okulwa nokukhwabanisa kunye nokucasula kwintsimi ye-bikini.
Ukunyamekela kalukhuni kwiminyaka engama-50
Ukunyamekela kweeKeck efanele
Ukusilalisa ngoncedo ngononophelo lwamayeza
Ubisi bejuju ekhaya
Yintoni enokuyenza xa ulusu lunamafutha kakhulu
Izizathu ezi-20 zokuba ungeke ulahle umthamo
Isaladi kaKhesari kunye nenkukhu kunye nezinye iiresiphi
Isondlo ngethuba lokuqala lokukhulelwa
Casserol nge-broccoli kunye noshizi
Iiprogram ezi-3 ezidaka kakhulu
Gcina ukutya okanye indlela yokutya ngokufanelekileyo kwaye ungasebenzisi imali eyongezelelweyo?
Ukunyamekela kakuhle kweenwele ezinde
Ubunini besetyhini oneminyaka engama-45
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo yeHessonite
Dessert ngaphandle kokubhaka "Ummangaliso"
3 iipuzzle ngokucinga okungagqibekanga, apho abantu abane-IQ baphendulula ngaphezu kwe-120. Ngaba unako?
Iinkwenkwezi ezi-7 zokubonisa ishishini ezinokuba ngabafundisi bakho
Indlela yokuhlamba umgca kumatshini wokuhlamba kunye ngesandla?
U-Alena Vodonaeva noNatalia Shturm bathumela isithombe esivela ku-Playboy ngenkumbulo kaHugh Hefner
Indlela yovuyisana nendoda